Website Design Services in Mandalay | Page2of4| Myanmar Web Store
VOWifi(သို့)Wifi Calling- Wifiဖြင့်ဖုန်းခေါ်ခြင်း
Vowifi (သို့) Wifiကိုအသုံးပြု၍ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း Voice Over Wifi ( VoWifi ) သည် ဝိုင်ဖိုင်Networkမှ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုသူများမှ VOwifi ရရှိသောSmartPhoneများကို အသုံးပြုပြီး ဝိုင်ဖိုင်ရရှိသောနေရာများမှာ...
၀က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကြည့်နေစဉ်“ Add to Home Screen” အလံကို မိတ်ဆွေတို့မြင်ဖူးမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ Progressive Web App ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ မမြင်ဖူးရင်တော့ https://www.pinterest.com လို Website...
Web Development, Website, Wordpress Website
Content Delivery Network (CDN) ဆိုတာဘာလဲ?
Content Delivery Network (CDN) ဆိုတာဘာလဲ? Content Delivery Network ဆိုတာကတော့ သင့်၏ မူလ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ရှိနေသော server နှင့်...
လူများထံမှ လေးစားမှုရ အောင်လုပ်သင့်တဲ့ အချက် (၇) ချက်
လးစားမှု Respect သည်လူတိုင်းဆီကအလိုအလျောက်ရရှိသောအရာမဟုတ်ပါ။သင့်အနေနဲ့လူအများဆီကလေးစားမှု (Respect)ရရှိရန်ဒီအချက်တွေလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပါသည် ၁. ယဉ်ကျေးပါ သင့်၏မိသားစုမှသင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သူငယ်ချင်းတွေထိနေ့စဉ်ဆုံတွေတဲ့လူတွေကိုယဉ်ကျေးစွာဆက်ဆံပါ သင်ကိုယ်တိုင်ရရှိလိုတဲ့လေးစားမှုအားတခြားသူတွေအားတူညီစွာပေးပါယဉ်ကျေးမှုဖြစ်စေသောအပြုများကို ရှာဖွေပါ ဥပမာ Storeဆိုင်လိုမျိုးမှာ သင်အနောက်မှာဝင်မယ့်သူများအတွက် တံခါးဖွင့်ပေးခဲ့တာမျိုး ကုန်ပစ္စည်းထမ်းပိုးလာတဲ့သူများကိုသင့်ရှေ့ကအရင်သွားခိုင်းတာမျိုးပေါ့…နောက်တစ်ခုကကျေးဇူးပြု၍နှင့်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းကို ဖြစ်နိုင်လျှင်ထည့်သွင်းပြောကြားပေးပါ ၂.လေးစားစွာပြုမူပါ တခြားသူတစ်ယောက်နှင့်စကားပြောနေစဉ်သင်မျက်လုံးအားမငြိမ်မနေခြင်း/တစ်စုံတစ်ယောက်အားမကောင်းပြောခြင်းစသည်မလေးစားထိုက်သည့်...
အင်တာနက်(Internet)ကိုဒီနေ့ခေတ်မှာ လူတိုင်းအသုံးပြုလာနိုင်ပါပြီ internet ဟာအအောက်ခြေလုပ်ငန်းမှ စပြီး စီးပွားရေးအထိအရေးပါတဲ့အရာတစ်ခုပါ အင်တာနက် (Internet)နှင့်ပတ်သတ်ပြီး သင့်မသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာတချို့ရှိနေပါတယ် ၁.အင်တာနက်(Internet)ဒိုမိန်းလိပ်စာများကိုတာဝန်ခံမှုအတွက်အကျိုးအမြတ်မယူပါ Assigned Names and Numbers for Internet Corporation...
e-commerce, Knowledge, Marketing
ကောင်းမွန်တဲ့ ကြော်ငြာ တစ်ခုဖြစ်ဖို့ ဘယ်အချက်တွေက အရေးကြီးလဲ?
ပထမဉီးဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ Facebook မှာ ကြော်ငြာတစ်ခု ရေးမယ်ဆိုပါစို့ – နံပါတ် ၁ အချက်ကတော့ Reader တွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ Title ( Head line )...
ကိုယ်ရဲ့ Website ပေါ် လာအောင်ဘာတွေလုပ်ရလဲ?
Google မှာ ကိုယ်ရဲ့ Website ပေါ် လာအောင်ဘာတွေလုပ်ရလဲ? ကျွန်တော်တို့ WordPress SEO plugin Yoast ကို အသုံးပြုနေစဉ် “Focus Keyword” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို...
Sync Floating Attack for Network/Information
Sync floating attack Information security ပိုင်း Attacking ပိုင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအတွက် ရေးသားပေးလိုက်ပါတယ် Sync floating attack ဆိုတာ Denial of Service Attack...
သင့်Websiteတွင် AI သုံးသင့်တဲ့အကြောင်းအရင်းများ
Why You Should Use AI on Your Website ? Artificial Intelligence (AI) ဥာဏ်ရည်တုဆိုတာ ဘာလဲ? AI ကို 1956လောက်က...
Knowledge, Web Design, Web Development, Website
Webapp မှာ bottom navigation ထည့်နည်း
Cialis 60 mg erfahrung Paddle 31 cm bei amazon viagra online kaufen test nehmen ohne kreditkarte. DocSimon...